Ukunyuka kwamazinga olwandle kubeka iLondon neLos Angeles engcupheni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunamadolobha amaningi asogwini emhlabeni wonke anakho ingozi enkulu yokuba nezikhukhula ngokukhuphuka kwamazinga olwandle. Ngaphezu kwezikhukhula, inezinye izingozi njengokunyamalala okuphelele kweziqhingi eseziqediwe, ukulahleka kwezindawo zokuhlala zemvelo nengqalasizinda.
Sigqamisa amadolobha amabili njenge ILos Angeles neLondon ubungozi bayo bokukhukhula kusuka emazingeni olwandle akhuphukayo bukhulu kakhulu. Yini ezokwenziwa ngakho?
Ukwanda kwezinga lolwandle ezindaweni ezisogwini
I-World Program for Scientific Research kanye ne-UNESCO bakhiphe isexwayiso kuwo wonke amadolobha asogwini emhlabeni. Umlayezo ucace bha: ukukhuphuka kwamazinga olwandle okubangelwa ukufudumala kwembulunga yonke kunengozi enkulu yokuqothula zonke izindawo ezisogwini. Uhlelo luqale ngoMsombuluko eColumbia University eNew York.
"Ukuqagela kwesikhathi esizayo ukwanda kolwandle kusongela ubukhona bamazwe amaningi azimele futhi kunomthelela ekufudukeni komhlaba wonke, ukuphepha kokudla kanye nengqalasizinda yasogwini," kusho uMongameli we-UN General Assembly, uPeter Thompson, ukuvulwa kwengqungquthela.
Iphrojekthi ehlola ukwehluka kwesifunda olwandle kanye nomthelela engaba nawo emadolobheni asogwini ifuna ukuhlinzeka amazwe nemiphakathi esogwini ngolwazi ngokushintsha kwesimo sezulu kanye nokufudumala komhlaba. Ukwazi imithelela, kuyadingeka ukwazi usongo nezinqubo zemvelo ezibangela ukwanda kolwandle. Ngakho-ke ingakwazi ukuzivumelanisa nabantu nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu futhi inikeze izixazululo kukho.
Kusukela maphakathi nekhulu lama-XNUMX, amazinga olwandle akhuphuke kakhulu futhi ashesha kakhulu ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke. Lokhu kufudumala kwembulunga yonke kubangelwa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okukhipha okwenziwa ngabantu.
Amadolobha amaningi abaluleke kakhulu nezindawo zomnotho zitholakala ngasogwini. Uma izinga lolwandle liqhubeka ngaleli zinga, ingozi yezikhukhula nokunyamalala kwamadolobha iphezulu impela. ILondon neLos Angeles bathambekele kakhulu ekulimaleni kwesikhashana nokulimazayo okuvela emazingeni olwandle akhuphukayo.
Kubaluleke kakhulu ukwazi nokuhlaziya imithelela emadolobheni ukuze kuqondiswe ukulungiswa kohulumeni esikalini sesifunda futhi kuthathwe izinyathelo ezisiza ekunciphiseni izinkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukunyuka kwamazinga olwandle kubeka iLondon neLos Angeles engcupheni